Meghan Markle ataura kuti vauye navatongi vakawanda veBrithani - "French couture haisi shoma!" - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Meghan Markle akati akafuka vamwe vanoronga british - "French couture haisi shoma!"
Meghan Markle anowanzopfeka zvipfeko kubva kuFrance yepafashoni imba Givenchy, uyo akaita chiroto chake chemuchato. Muiti wezvokuroora zvechato zveChristine Diana David Emanuel akati "akange aine chokwadi" kuti Meghan anofanirwa kuunza vanhu vakawanda veBrithani. Akanyevera kuti rudo rwaDuchess rwemicheka chemavara "rinofanira kutengesa mari shoma," uye kuwedzera, "Sezvatinoziva, chikwata cheFrance hachibatsiri.
Ini ndinotenda zvakasimba kuti kana akaroora kumhuri yeumambo, iye anofanira kutsigira vakagadzira veBritish
"Asi ndapota, Meghan, tenga Britain!"
Mutungamiri Emanuel akaudza Yahoo's royal box: "Zvandinoona zvinosuruvarisa, zvekupedzisira michato yemadzimambo yakaitika-tarisa zvishoma. Somuenzaniso, Duchess of Sussex akaenda kuGivenchy.
"Hungu, muumbi weBritish, asi chipfeko chakaitwa muFrance.
"Ndiri kunyatsogutsikana kuti kana akaroora kumhuri yeumambo, ari pachena, anofanirwa kutsigira vakagadzira veBritish.
"Kune vakawanda vane zvikwereti zveBritain vane tarenda vanogona kuzviita."
Meghan Markle ane Givenchy pamuchato wamambo (Mufananidzo: GETTY)
Meghan Markle akakurudzirwa nemugadziri wemapfekete emuchato aChristine Diana (Mufananidzo: GETTY)
Akataura kuti nguo yaMeghan yaiva "yakanaka", asi apo muumbi akaenda ku Windsor kunoona jasi, akaona kuti zviratidzo zvaive "Givenchy, Givenchy, Givenchy".
Mr. Emanuel akawedzera, "Ndaifunga" kuisa-kwete, kwete. Inofanira kuva british. "
Asi Meghan akasarudza kuti muumbi weChirungu Stella McCartney aizogadzira jasi rechipiri kumuchato wake.
Munguva yake yokutanga kutarisa semunhu wepamutemo wemhuri yeumambo, Meghan akapfekedza chimiro chakachena chena chemutsipa. nekuda kwekugamuchira chikwata chake gore rapera.
Fester designer akati zvaive zvichida kuti Baby Archie aizopfekedza tsika dzechiChirungu dzakadai se "shati duku, Peter Pan mashizha, amai vemaparele". uye shorts shoma sezvaunokura. "
Asi akati Meghan aigona kupfeka vechidiki mune mamwe marongerwo eAmerica. VaManuel vakati, "Asi America ndiyo Meghan. Meghan is America. Saka ndiani anoziva, anogona kunge ari mumucheche Ralph Lauren? Ndiani anoziva? "
Muchengeti wamambo anoomerera kuti ichange "yakadhura" uye "isina zvazvinobatsira" kupfeka mwana muRalph Lauren, achiwedzera, "Ndiamai. Kana achida kuiisa mumucheche Ralph Lauren, ichava mucheche Ralph Lauren. "
Meghan naHarry vatsanangura vhiki yakapera kuti vakanga vagamuchira mwana munyika yose pa 6h26 musi weMuvhuro 6 May, kuenzanisa
Meghan Markle naHanry Harry vanoratidza Archie mwana kunyika (Mufananidzo: GETTY)
Mumazuva akatevera kuberekwa, Meghan naHarry vakaronga mufananidzo wemifananidzo nemwanakomana wavo akaberekwa, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.
Vakaroorana vamambo vaifunga nemutoro wavo wekupedzisira vhiki yapfuura paSt George's Hall muWesterns Castle. nzvimbo yekugamuchira yemuchato wavo gore rapera
Prince William naKate, Duchess of Cambridge, vakashanyira Harry, Meghan uye mwanakomana wavo wevhiki vese paimba yavo, Frogmore Cottage, muWesterns musi weChishanu manheru.
Kate naWilliam vanonzi vakaenda kuMheposor mushure mekuita basa [1 9659029]
Vanhu: Harry anopa Archie mwana mashoko anofadza paaishanyira kuOxford Children's Hospital